काग्रेस नेता जाेशी अस्वस्थ, नर्भिकमा उपचार हुदै – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
काग्रेस नेता जाेशी अस्वस्थ, नर्भिकमा उपचार हुदै
- February 26, 2021 मा प्रकाशित
फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था निकै जटिल रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । मस्तिष्कघात भएपछि जोशीलाई वीर अस्पताल हुँदै नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । दोस्रो हात बाउँडिन थालेपछि जोशीले श्रीमती र छोरीलाई अस्पताल लैजान भनेका थिए । अस्पताल लैजाँदा गाडीमा बोलिरहेका उनी अस्पताल पुग्दा बोहोस भइसकेका थिए । सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा ठाउँकोमा रगत जमिसकेको पाएपछि वीरबाट नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो । उनको उपचारमा संलग्न नर्भिकका न्यूरो सर्जन डा. राजीव झा भन्छन्, ‘उहाँ कोमामा हुनुहुन्थ्यो । सास फेर्न गाह्रो भएको थियो र बान्ता फोक्सोमा पुगिसकेको थियो ।’ सास फोर्न सहज होस् भनेर पाइप राख्नुका साथै फोक्सोमा पुगेको वान्ता निकालिएको छ । डा. झा भन्छन्, ‘हेर्दै जाँदा उहाँको एउटा आँखाको नानी फुलेको देखियो । दुबै आँखाको नानी फुलेको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र हुन्छ । एकातिर त्यस्तो देखिनु भनेको आधा दिमागले काम नगरेको देखियो ।’ सिटी स्क्यान गर्दा रगत दिमागको बीचमा पानी जम्मा हुने ठाउँमा पुगेर ब्लक गरेको पाइएको डा. झाले बताए । सुगर, प्रेसर लगायतका रोगबाट समेत पीडित उनले रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहेका थिए । यस्तो मानिसको सर्जरी गर्दा धेरै रक्तश्राब हुने भएकाले रगत जोहो गरेर सर्जरी गरेको उनले बताए ।
डा. झा भन्छन्, ‘अहिलेसम्म १२०/१३० मिलिलिटर पानी निकालेका छौं । उहालाई भेन्टिलेटरमा राखेका छौं ।’ यो अवस्था निकै जटिल भएको र यस्तो अवस्थामा पुगेका ६०/७० प्रतिशतलाई बचाउन नसक्ने उनले सुनाए । डा. झा भन्छन्, ‘उहाँलाई कसरी बचाउने भनेर हामी लागेका छौं ।’ उनका अनुसार यस्तो अवस्थाबाट बाँचेकाहरुमा ठूलो प्यारालाइसिस लामो समयसम्म रहनसक्ने उनले बताए ।